Tsanangudzo yeIndel's Linux Dzakajeka, Zvigadzirwa zvayo neNzira yekuGadzira
Muchidimbu: Intel's Clear Linux haisi kugoverwa kwako kwezuva rimwe kwe Linux. Iyo yakasikwa nokuda kwechinangwa chairo uye inopfuura iyo.
Bvisa Linux inogadzirwa neIntel's Open Source Technology Center inonyanya kutarisa pamusoro pegore. Haisi yako nguva dzose inogadzirisa-Linux kuparadzirwa, asi kugoverwa kunowanzoenderana nemhando dzakasiyana-siyana dzekushandiswa kwemafu kushandisa zvakanakisisa zveIntel's hardware neyekuvakwa. Kune humwe huri nani hwekutonga kwesimba uye kushanda optimizations pamwe chete nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Haisi tsanangudzo Bvisa Linux kudzokorora asi ndakapedza nguva yakati ndichitamba nayo. Uye ini ndichagoverana zvandaive nazvo nekugadzirisa kuiswa kwe Linux uye kuisa. Asi kutanga, ngationei maitiro eDaily Linux mumashoko.
Bvisa Linux Features
Intel Clear Containers: Intel Clear Containers ndiyo inoshandiswa yakasununguka yekugadzirisa-teknolojia inopinda Docker, Kubernetes uye Rocket uye inowanikwa muDrazil Linux. Yakagadzirirwa kushandiswa kwakanakisisa kwezvinhu zve Intel Architecture VT zvichiita kuti kukurumidza kukurumidza uye kuderedzwa kwepamusoro.
Cloud Integrated Advanced Orchestrator (ciao): Ciao inopa zvishoma, zvakakwana TLS-based, zvishoma kushandiswa kwekushandisa scheduler designer kudzivisa kupera kwemazuva ano OS mapurojekiti. Inopa hutachiona hwakagadziridzwa, kushandiswa, kusununguka kwekuendeswa nekuchengeteka.
Stateless: Inotarisana nekodzero yekugadzirisa uye inoparadzanisa kusungirirwa kweS OS ne-config system uye data user. Saka, kunyange kana ukasvibisa nehurongwa nekukanganisa, Chengeta Linux OS inotanga kuita zvakanaka nekugadzirisa zvekufekitari kuitira kuti iwe ugone kuiisa zvakare zvakare.
Software Updates: Kusiyana nezvimwe zvikamu, Clear Linux inotsigira bhariary deltas update. Inotsigira kuvandudzwa kweiyo chete mabhii ayo anochinja anotungamirira kune zvinyorwa zvishoma zvekugadzirisa uye saka nokukurumidza kushandisa. Nokudaro, chaizvoizvo, chikuru chekuchengetedza chikwata kana tsvakiso yepamusoro inongotora maawa mashoma kubva iwe usingakwanisi kutora mapepa akazara, uye chete chikamu chakashandurwa.
Mixer: Kusanganiswa inobvumira kubatanidza OS kushandiswa zvakanyanya. Bvisa Linux inopa bundle yehutano hwakasiyana-siyana hwehutachiona uye inotsigira kuwedzera maitiro ehutano mamwe maparidzi.
Telemetry: Shatisa Linux inosanganisira sarudzo ye telemetry iyo inotaura zviitiko zvekufarira saKugadzirwa, kugadzirisa kushanda kwezvibvumirano, kuderedza kuderedza doro nezvimwe uye kunovaudza kudzokera kuboka rekufambisa. Izvi zvachose zviri mubasa rekushandisa uye zvinogona kuvhiringidzwa.
Autproxy support: Svinura Linux inowana Proxy Auto-config script uye inoshandisa iyo kugadzirisa chinonzi proxy chinoda kuburitswa.
Basa Rakawanda Multiversioning: Rinobvumira kugadzirisa kwebasa rezvivakwa zvakawanda zvekugadzira uye maitiro avo apo bhinari inowona huvakwa panguva ye runtime.
Zvose zvekutsauka kwemashoko zviripo nguva dzose.
Zvinyorwa zvinoteveraZvitsa Linux Distributions yeKutsvaga uye Kuedza Kupindira mu 2017
Zvirongwa zveSystem yekuisa Siri Linux
Bvisa Linux yakagadzirirwa kumhanya pane imwe zvinhu zvishoma, zvakaderera seC core core, 128 MB RAM uye 600 MB yekuchengetedza. Zvisinei, vakakurudzira pasi iri pasi zvinodiwa kuti zvive zvakanaka.
2nd Generation, kana kuti gare gare, Intel® Core ™ processor mhuri.
Intel® Atom ™ processor C2000 mhuri yemiti yemaseva - Q3 2013 version kana kuti gare gare.
Intel® Atom ™ processor E3800 series - Q4 2013 version kana kuti gare gare.
Nzira yekugadzirisa Dhiini Linux
Kune Virtual Hard Disk inowanikwa ine disk partitions uye faira system iyo inogona kushandiswa se disk hard of machine chaiyo.
Iwe unogona kubata VHD yeAzure, chifananidzo chegore, zvimbi, hyper-v VHD, installer ISO uye mufananidzo wehupenyu.
Ini ndakakonzera zvakajeka-linux installer image yeChenese Linux OS, iyo yandichashandisa kushandisa boot yangu system uye kuisa GUI pamusoro payo.
Kana uri kuisa iyo muBlotual Box seyangu, usakanganwa kubvumira EFI pasi peStat tab mu Virtual Box kuti ibate.
Danho 1: Gadzirai Virtual Box uye boot kubva kuIOO.
Nhanho dzokutanga dzinosanganisira Keyboard select and proxy settings for connection to update server. Mune menyu yekugadzirisa, unogona kusarudza imwe yezvisarudzo zviviri: shandisa Siri Linux OS kana kugadzirisa ikopi iko yakagadzirwa.
Muchirongwa Chekusimudzira Kuvandudza, unogona kubvumira (uye usarega) Shandisa Linux kuti uwane zvinyorwa kuti uwedzere kugadzikana kwetsika uye uzvitumire kuIntel.
Muchiito chinotevera, sarudza Automatic type type, kana Manual kana uchida kutora zvinhu muruoko rwako. Chirongwa chinotevera ndechekusika chikamu uye kusarudza vhidhiyo paunenge uchida kuisa.
Nhanho yekupedzisira inokubvunza iwe kuvimbiswa uye kuiswa kunotanga. Zvinotora nguva nguva isati yasvika iyo inozivisa iwe yekupedzwa. Bvisa vhidhiyo uye uitangezve.
Dzvanya kuti uone slideji.
Kana wapedza, tanga Virtual Machine uye uise midzi sezita remutauro uye password iwe waunoda kuchengetedza.
Chinhu chinotevera chandichaita ndechokuisa GUI kana Desktop Environment, asi izvi zvisati zvaita zvinotanga kugadzira mushandisi kutanga.
Nhanho 2: Kugadzirisa midzi yomudzidzi uye Aunti yeruti
Kwenguva yekutanga apo iwe unotanga kuChenesa Linux OS, pinda "root" sezita rekushandisa uye password iwe waunoda kuchengeta nekushandisa murairo uri pasi apa kuwedzera mumwe mushandisi.
Kana wapedza, unofanirwa kuita kuti murairo wekuda waunoshandisa wakashandise. Wedzerai zita rekushandisa kuti rifambe boka uye ugoita boka rerugare.
Gadzira faira / etc / sudoers uye uwedzere pasi apa mutsara.
Chengetedza kuchinja, kuvhara uye kuvhara zvakare zvekuchinja kuratidza.
Nhanho 3: Kuisa GNOME desktop environment
Bvisa Linux ine ugadzirwa hwakasiyana uye hunoshandiswa software update utility kana swupd kuwedzera kana kuvandudza maitiro uye kuita zvirongwa zvehurongwa. Iwe usati watanga kutanga kushandisa, iwe uchada kuisa chimwe chekushanda chekuita sa sysadmin-basic, editors, c-basics nezvimwe zvikwata zvinobatsira.
Iye zvino, iwe unogona kumhanya iri pasi apa murairo kuti utange GNOME maneja wekodhidhi.
Mashoko ekupedzisira kuDhidza Linux
Ne Linux isingagumi kuparadzirwa, Intel haana kuedza kuumba imwe chinangwa chinowanzo Linux distro. Bvisa Linux chinhu chinotorwa zvishoma nezvishoma nezvitunha zvakasiyana-siyana zvinoshandisa hardware yaIntel kuti iite zviri nani nekugadzirisa. Ndizvo kuwanika mumusika weAzure mazano ekuwedzera kwayo, somuenzaniso.
Ndezvipi zvaunofunga kujekesa Linux, titiudza mumashoko.
Maitiro ekuisa Linux Mint 20 [Iyo Yakareruka Nzira Inogoneka]